Roobab halis galiyey magaalada Muqdisho | Dayniiile.com:-wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Roobab halis galiyey magaalada Muqdisho
Roobab halis galiyey magaalada Muqdisho
Roobabkii xiliga deyrta ayaa xalay ka curtay qeybo ka mid ah koonfurta Somalia oo ay ku jiraan magaalada Muqdisho iyo gobolada la deriska ah
Roobka ayaa saameyn xoogan ku yeeshay magaalada, waxaana xirmay qaar ka mid ah jidadka muhiimka ah ee caasimada ka dib biyo badan jareen.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Maanta kormeeray qaar kamid ah goobihii uu sida gaarka ah u sameeyay Roobkii magaalada Muqdisho ka da’ay 24kii saac ee lasoo dhaafay.
Wadooyinka Caasimadda oo uu kormeerka ku tagay Guddoomiye Cumar Filish ayaa waxaa ka socday howla ay dowladda hoose Xamar Biyaha uga saareyeen goobihii uu Roobka biya dhigay si loo fududeeyo isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha.
“Maadaama saacadihii la soo dhaafay roobkii da’aayey uu biyo dhigay qeybo badan oo magaalada Muqdisho ka mid ah, ayaan waxaan kormeeray habka ay dowlada hoose ee Muqdisho u wado howlaha ay biyaha kaga saareyso magaalada” ayuu yiri Cumar Filish.
Shaqada biyo dhaamiska ah ee dowlada hoose ka wado magaalada ayaa aad u yar marka la eego saameynta xoogan ee ka dhalatay biyaha roobabka.
Previous articleWasiirka waxbarashada dowladda Taalibaan oo sheegay in haweenka dalkaasi ay sii wadan karaan in ay wax ka bartaan jaamacadaha
Next articleAyman al-Zawahri oo fariin u diray dagaalyahanada Al-shabaab.
Hoggaamiyaha kooxdii qarxisay masaajidka Daarul Faaruuq oo lagu xukumay 53 sano...
Hoggaamiyaha maleeshiyadii weerarkii qaraxa ahaa kusoo qaaday Masaajidka Darauf Faaruuq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota oo la yiraahdo Emily Haris ayaa lagu xukumay...
Wasiir ka tirsanaa Maamulka Hir-Shabeelle oo muqdisho ku geeriyooday.
Sanatooradii ugu horeyey Hirshabeele oo la doortay
Rooble ayaa kulan la qaatay hay’addaha Maaliyadda Dalka
Alshabaab oo Qaraxyo ku bur burisay Eraboorka magaalada Buula Barde
Maleeshiyaad hubeysan oo goordhaw qof shacab ah ku toogtay Xarunta shirkada...
DEG DEG: Madaxweyne Farmaajo ayaa Magacaabay Guddi Baara Kiiska Ikraan Tahliil